Porn Debate - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားခြင်း
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် YBOP ၏ဆောင်းပါးများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများရှိနေခြင်းအတွက်ငြင်းခုံခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ သို့သော်အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးများသည် Psychology Today blog ၏ရေးသားချက်များ၊ မေးခွန်းထုတ်စရာလေ့လာမှုများသို့မဟုတ်စွဲဆေး၏သက်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ တုန့်ပြန်မှုအဖြစ်ရေးသားခဲ့သည်။
ကြည့်ပါ - မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး
"ကျနော်တို့ကတိုင် Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are အဘယ်ကြောင့်?" မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က Debunking
ယောက်ျားလေးများနှင့် Porn: တစ်ဦးက Moving ပစ်မှတ်- ယနေ့လူငယ်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများမှတင်ပြသောပြproblemsနာများ၏နောက်ကွယ်၌“ ထူးခြားသောအားနည်းချက်” မှာဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သည်ယနေ့အွန်လိုင်း၏အလွန်အစွမ်းထက်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တိုက်မိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲကြမယ်, - စွဲလမ်းဆေးပညာအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း DSM သဘောမတူရန်သဘောတူ။ အမေရိကားရဲ့ထိပ်တန်းစွဲကျွမ်းကျင်သူများကကြောင်းလိင် (နှင့် porn) အတည်ပြုစွဲ၏သစ်တစ်ခုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြန့်ချိမယ့်ပါပြီစှဲစစ်မှန်သောစှဲဖြစ်ကြသည်။
မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး Porn Include - တစ်ဦးတည်းသာဦးတည်ချက်အတွက်အင်တာနက်စွဲမှတ်အပေါ်ဦးနှောက်သုတေသန။ ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သည်ကတည်းက အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းကျုံ့ဦးနှောက်: Porn အသုံးပြုသူများအဘို့အနိမိတျဆိုးသတင်းများမကြာသေးခင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းသုတေသနကိုင်တွယ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဒီရေသစ်ကိုသုတေသနပြုအင်တာနက်စွဲ addressing ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလှိမ့်ခဲ့သည်။
porn, Pseudoscience နှင့် DeltaFosB (2013) - သငျသညျ porn စွဲအကြောင်းကိုထိုအ5အကျွမ်းတဝင်ဒဏ္ဍာရီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသလား? တစ်စုံတစ် ဦး ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုဟူသောအယူအဆသည် pseudoscience ဖြစ်သည်ဟုဆိုဖူးပါသလား။ အခွင့်အလမ်းများမှာဤပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံသည့်လူကြိုက်များသောဒဏ္sာရီများကိုသင်ကြားရလိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ခုတည်း neurobiological ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်ဤ "သိပ္ပံ" ဆင်ခြင်တုံတရား invalidates
ဒေါက်တာ Don Hilton သည်သက်သေကိုငြင်းခုန်ခဲ့သည်
ညစ်ညမ်းစွဲ၏တည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါသလား? -“ ဆွေးနွေးချက် -ညစ်ညမ်းစွဲ - neuroplasticity များ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့် supranormal လှုံ့ဆော်မှု"Donald L ကိုဟီလ်တန်, MD အသုံးပြုပုံအတွက် လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ.
Porn စွဲလိင်စွဲလမ်းသည်မဟုတ် - အဘယ်ကြောင့်အရေးပါ - လိင်စွဲလမ်းအစစ်အမှန်လူတွေလိုအပ်တယ်; porn စွဲနေတဲ့မျက်နှာပြင်လိုအပ်သည်။ porn စွဲလိင်စွဲလမ်း၏ထီးအောက်မှာဝှက်ထားသောဖြစ်နေဆဲနေစဉ်, ရောဂါလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးသောသူအသုံးပြုသူများမရေရာသောအနေအထား၌ရှိကြ၏။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အမှုအရာတို့ကိုထုတ်တွက်ဆရန်ရှိသည်။
porn နှင့် DSM-5: Play စမှာ Sexual Politics ရှိပါသလား - အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများ၊ DSM-5 သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းခြင်း (ဂိမ်း၊ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံ၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ) နှင့်ဆက်စပ်သည့်အရာအားလုံးကို 'ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်ရောဂါများ' သို့ရွှေ့ပြောင်းပြီးအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုနားလည်သောစွဲလမ်းမှုကျွမ်းကျင်သူများ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ထားသင့်သည် ပလတ်စတစ် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်နောက်ပြန်ဆုတ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စွဲနိုင်ငံရေး၏လုပ်အားခ - စွဲစွဲလန်းလန်းသောနိုင်ငံရေးကြောင့်ချောသောလျှောလျှောကျသွားသလား။ 1992 မှာတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာလူ့လိင်၏နက်ရှိုင်းနားလည်မှုစိတ်ဓာတ်သည့်ဆေးဝါး၏လယ်ပြင်ထဲမှာရာအရပျကိုယူ။ ဒါဝိဒ်သည်အီး Smith က MD, စွဲဆေးပညာ၏ American Society (၏အတိတ်သမ္မတအရASAM), ဆရာဝန်များတစ်ဦးထက်ပိုချက်ချင်းအန္တရာယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ်လိင်စွဲလမ်း၏အသိအမှတ်ပြုမှုကွာ bartered ။
အဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှု - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုလေ့လာမှုများသည်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများအပေါ်တွင်မှီခိုပြီးထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့များမရှိပါ။ ယခင်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ၏အလွတ်သဘောထိန်းချုပ်သောအုပ်စုများကကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာကိုပြသနိုင်သနည်း။
နိုင်ငံရေးနှင့် porn အပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ
နိုင်ငံရေး, Porn နှင့်စွဲအာရုံကြောသိပ္ပံ - အင်တာနက် porn အကြောင်းစပ်စု? တစ် ဦး စွဲအထူးကုမေးပါ။ အားလုံးအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုကိုကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူဦးနှောက်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အာဏာရှိသည်
အင်တာနက်က Porn စွဲ၏ဖယ်ဘယ်သူမျှမကဇီဝဗေဒ Sense သည်ကို - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ anorexia နှင့်လိင်စွဲမှုနှစ်မျိုးလုံးသည်တွဲဖက်တည်ရှိနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် David Ley အားကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာ၏အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
porn လေ့လာမှု: ပွုလုပျခွငျး-ဒါမှမဟုတ်မရှင်းပြပါကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? - porn သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြောင်းလဲစေသည်။ အခြားသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုကြလော့။ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည့်လက္ခဏာများကြောင့်လူငယ်များသည်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများသို့ ဦး တည်နေသလား။
အဆိုပါ Porn Debate ၏အဆုံး? - porn ၏ ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာများ။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်တွင် ဦး နှောက်သုတေသီများဘာရှာဖွေနေကြမည်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဒီသုတေသနပြီးသားမပြုရ? အဘယ်ကြောင့်ရောဂါရှာဖွေတံဆိပ်များဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပါသလဲ
DSM-5 အဆိုပါကော်ဇောအောက်မှာ Porn စွဲသဖွယ်ရန်ကြိုးစား - လိင်နှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံအကြား link ကိုအသိအမှတျပွုဖို့အချိန် အကယ်၍ သင်သည် DSM ကိုပြန်လည်မစဉ်းစားလျှင်၊ သင်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးချလျှင်သင်၏အခြေအနေသည်“ မတည်ရှိပါ” ပါ။ စွဲငြိခြင်း (ဥပမာ - စိုးရိမ်ခြင်း၊ ED၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပြproblemsနာများ) ကဲ့သို့သောမနှစ်မြို့ဖွယ်လက္ခဏာများအတွက်သင့်ကိုကုသလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အမှန်တကယ်ရောဂါဗေဒ၏။
ကျောင်းများခုနှစ်တွင် Porn သှနျသငျ? - ကျောင်းသားများအားညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်ဆံရန်ပြင်ဆင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်အကြောင်းသူတို့ကိုသင်ပေးပါ။ porn တက်ပေးခြင်းမြားသညျလညျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံဖော်ဖို့စတင်နေကြသည်။ အိမ်ရှေ့မှပြန်လာသောစစ်သားလိုပဲ, သူတို့နှင့်အတူအသက်တာ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များထဲသို့ pithiest ဆုံးနဲ့ရွေ့လျားနေသောအသိအမြင်အချို့ကို ပူဇော်. , highspeed porn, မလိုဘဲ။
Drumroll: Porn ပရိသတ်များသည်တစ်ဦး Academic ဂျာနယ် - Academia သည်ညစ်ညမ်းစာနယ်ဇင်းအသစ်တွင် 'အကောင်းမြင်မှုကိုအလေးထား' ရန်ပြင်ဆင်သည်။ အကယ်၍ လူ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည်ပြင်းထန်သောရည်မှန်းချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်နေပါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုရန်မှာသေချာသည်။ သို့သော်“ Porn လေ့လာရေးဂျာနယ်” ဘုတ်အဖွဲ့သည်ဤအရေးပါသောအခန်းကဏ္fulfillကိုပြည့်စုံစေရန်လိုအပ်သောသီးခြားစီနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကင်းမဲ့နေသည်။
post-Porn ယဉ်ကျေးမှု -“ ပြန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကို Fort Knox လိုစောင့်ကြည့်နေတယ်” ဒီနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကလေးများရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပေးသောပညာရေးသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုခွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောက်ပတဲ့ပညာရေးအခွင့်အရေးကိုမဖြုန်းတီးပါစေနဲ့။
Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာခြင်း။ အသုံးပြုသူများကော? - ရှိမုနျကို Lajeunesse မှအိတ်ဖွင့်ပေးစာ။ ရှိမုနျကို Lajeunesse အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆို "porn အပျိုကညာ" မတှေ့နိုငျသူတစ်ဦးသုတေသီဖြစ်ပါတယ်။ သူက porn အန္တရာယ်ကင်းခဲ့ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ငါတို့သည်သူ့ကိုအပြဿနာအချို့ကိုအခြေခံနားလည်မှုပေး
ကြှနျုပျတို့မညျသို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ porn စွဲ၏ပြဿနာကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်သလဲ - Ex-porn အသုံးပြုသူသည် porn ၏အမှန်တကယ်အန္တရာယ်များကိုရှင်းပြရန်စိန်ခေါ်ချက်ကိုဖော်ပြသည်
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး: အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား? - ထုတ်ဝေဖူးသမျှအများဆုံးညစ်ညမ်းသော porn လေ့လာမှု! 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေး' (PCES) သည်အနည်းငယ်သာတိုင်းတာနိုင်သော်လည်းယင်းကိုဖန်တီးသူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်အပြုသဘောဆောင်သည်ဟုစိတ် ၀ င်စားသည်။ ရရှိလာသောကောက်ချက်အချို့မှာယုံကြည်မှုလွန်ကဲသည်။
'သန်းပေါင်းများစွာသောအတွေးအခေါ်များ' သည်လျှပ်တစ်ပြက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ longitudinal လေ့လာမှုများ porn အရသာ morphing ထုတ်ဖေါ်ဖို့လိုအပ်
SPAN Lab မှ (၂၀၁၃)“ လိင်ကွဲပြားမှုရှိသူများ” တွင်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုလိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ကားအားအစီရင်ခံတင်ပြသည့်“ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုကိုသက်သေအထောက်အထားမရှိ” ဆန်းစစ်ချက်ကိုသုံးသပ်ခြင်း - SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းမှသုတေသီများသည်ပြsexualနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကိုဖော်ပြရန်အင်တာနက်အကြိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသီအိုရီအပြင်“ hypersexuals” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးဒီအားထုတ်မှုနှင့်အတူအများအပြားပြproblemsနာများရှိပါသည်။
SPAN Lab မှစာတမ်းများသည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုပိုဆိုးစေသည်
SPAN Lab မှ Porn လေ့လာမှုအသစ် (၂၀၁၃) တွင်အဘယ်အရာမျှမရှိပါ - SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းသည်အများပြည်သူသုံးစွဲရန်အတွက်ဝါဒဖြန့်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်သူတို့၏အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များကိုထပ်မံလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းငါးခုသည် YBOP ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုထောက်ခံသည်။
ဒေးဗစ်လလေ၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ပီတာဖင်နင်တို့၏“ Clကရာဇ်မင်းအဝတ်အစားမရှိ။ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဖြစ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သည့်မယုံနိုင်စရာဝါဒဖြန့်ချိရေးအပိုင်းအစ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်၎င်းကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းသည်။
SPAN Lab မှခွငျးအားဖွငျ့ " 'porn စွဲ' (2015) နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation" ၏ analysis, - နောက်ဆုံးတွင် SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းသည်သူတို့၏ 2013 EEG လေ့လာမှုအတွက်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရလဒ်များအနေဖြင့် desensitization ကိုပြသပြီး SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းမှရလဒ်များကိုလှည့်ပတ်သည်။
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်း - အချိန်နှင့်အမျှပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆန်းစစ်ခြင်း” ၏ဝေဖန်မှု (၂၀၁၅)၊ Grubbs et al ။ - Joshua Grubb ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုဟုပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောဝါဒဖြန့်ချိရေးအကျပ်အတည်းများဖြစ်နိုင်သည်။
ယောရှုသည် Grubbs သူ၏ "ရိပ်မိ porn စွဲ" သုတေသနနှင့်အတူငါတို့မျက်မှောက်ကျော်သိုးမွှေးဆွဲသလဲ? (2016) -“ သိမြင်နိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု” နှင့် Joshua Grubbs ၏အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုများ။
ပါမောက္ခ Zimbardo ဆွေးနွေးငြင်းခုံ
Philip Zimbardo & Gary Wilson ကမင်းရဲ့ Manhood နဲ့ Porn ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးနေသလဲ - ဖိလစ်ဇင်ဘာဒိုပါရဂူဘွဲ့နှင့်တွဲဖက်ရေးသားသည့် Skeptic မဂ္ဂဇင်းအတွက် ၂၀၁၆ ဆောင်းပါး
ပို။ ပို။ ပို။ သောကိစ္စရပ် - ဖိလစ်ဇင်ဘာဒိုနှင့်ဂယ်ရီဝီလီယန်တို့၏မာတီကလိန်းကိုတုံ့ပြန်မှု - ဖိလစ်ဇင်ဘာဒိုပါရဂူဘွဲ့နှင့်တွဲဖက်ရေးသားသည့် Skeptic မဂ္ဂဇင်းအတွက် ၂၀၁၆ ဆောင်းပါး။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းဆောင်းပါးအပေါ်မာတီကလိန်း၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016) - Kinsey Institute မှရေးသားပြီး၊ အခြားပါရဂူဘွဲ့ ၇ ခုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၏ဝေဖန်မှု -ပျက်ဆီးနေသောကုန်စည်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးတော့ပူပန်အကြားတွင်တစ်ဦးအာမခံအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏အမြင်"(Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen, 2017) - BYU မှသုတေသီသုံး ဦး သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်“ အပြာစွဲခြင်းအပေါ်ယုံကြည်မှု” ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်“ အမျိုးသမီးများကိုမုန်းတီးခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍“ ဝေဖန်မှု” လား။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်စားပြုသူအမေရိကန်နမူနာတွင်အသုံးပြုသူများထက်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုရှိကြသည်။ ” (2016) - ကနေဒါနိုင်ငံမှသုတေသီသည်သာတူညီမျှမှုဝါဒကိုညစ်ညမ်းသောစောင့်ကြည့်သူများက ပို၍ သာတူညီမျှရှိစေရန်အာမခံသည့်နည်းဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
"ဟုအဆိုပါလင်မယားဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ခံစားသက်ရောက်မှု: ပွင့်လင်း-အဆုံးသတ်, ပါဝင်သူ-အကြောင်းကြား, Bottom-Up ကိုသုတေသနကနဦးတွေ့ရှိချက်" ၏ဝေဖန်မှု (2016) - ကနေဒါနိုင်ငံမှသုတေသီသည်အမျိုးသမီး ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောစုံတွဲများကိုရွေးချယ်ပြီးရလဒ်များကိုလွဲမှားစေသည်။ စံမဟုတ်သောအကဲဖြတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုသည်။
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲကြမယ်,
DSM-5 အဆိုပါကော်ဇော (2011) လက်အောက်တွင် Porn စွဲသဖွယ်ရန်ကြိုးစား
Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာခြင်း။ အသုံးပြုသူများကော။ (၂၀၁၀)
မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုဦးနှောက်လေ့လာရေး Porn (2013) Include
ကျောင်းများခုနှစ်တွင် Porn သှနျသငျ? (2013)
အဆိုပါ Porn Debate ၏အဆုံး? (2011)
အဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှု (2012)
CSBD တွင် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ပါဝင်သည်။